१४ वर्षकी किशोरीको पेटमा ८ महिनाको गर्भ, गरिबीको फाईदा उठाएर कसले गर्यो यस्तो कु’कर्म ? (भिडियो हेर्नुस्) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/१४ वर्षकी किशोरीको पेटमा ८ महिनाको गर्भ, गरिबीको फाईदा उठाएर कसले गर्यो यस्तो कु’कर्म ? (भिडियो हेर्नुस्)
१४ वर्षकी किशोरीको पेटमा ८ महिनाको गर्भ, गरिबीको फाईदा उठाएर कसले गर्यो यस्तो कु’कर्म ? (भिडियो हेर्नुस्)
गुल्मी । अविवाहित १४ वर्षकी अविवाहित किशोरीको पेटमा छ ८ महिनाको गर्भ । गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाको पनाहामा भएको एउटा घटनाले अहिले सामाजिक सञ्जाल चर्चा पाएको छ । गरिवीको च पे टा मा रहेकी यि किशोरी माथि यस्तो कुकर्म गर्ने को हो अहिले सम्म खुलेको छैन । उनले आफ्नो पेटमा गर्भ वसेको भन्ने कुरा धेरै पछि मात्र थाहा पाइन् । उनले पेट ठूलो हुँदै गएपछि र महिनावारी रोकिएपछि थाहा पाएको बताइन् । उनले यस्तो कु क र्म गर्ने दुई जनाको नाम बताएकी छन् । ‘निनचौर भन्ने ठाउँका दुईजना केटा हुन्, एउटा लेखे हो के रे अर्को विजुलीको काम गर्ने केटा हो, उनले भनिन् मेरो वर्काले मुखमा पट्टी लगाएर ज व रज स्ती मोटरसाइकलमा राखेर धुर्कोट लिएर गए ।’
उनलाई बच्चा कति महिना पछि जन्मन्छ, आफ्नो पेटमा हुर्केको बच्चा कति महिनाको भयो भन्ने पनि थाहा छैन । उनको घरमा चामल वाहेक केही छैन । विपन्न परिवारका यिनीहरुको एउटा झुपडी छ । त्यसमा ७ जनाको परिवार बस्छ । आमाबुवाकी जेठी छोरी अहिले १४ वर्षकी पुगीन् । उनको पेटमा ८ महिनाको गर्भ हुर्कीरहेको छ । विष्नी दमाई नाम गरेकी यि किशोरीले आफ्नो घर भएको स्थानलाई सिमाहा घाट बताउँछिन् । उनलाई बच्चा जन्माउने इच्छा पनि नभएको बताएकी छन् ।
उनले त्यसवारे प्रहरीलाई खबर पनि नगरिएको बताइन् । सामाजिक सञ्जाल युट्युवमा यो कुरा बाहिरिएपछि जनप्रतिनिधि र गाउँका केही अगुवा घरमा आएर बुझेर गएको बताइन् । गाउँमा स्वास्थ्य चौकी पनि नजिक पनि नभएका कारण कलिलै उमेरमा आमा बन्न लागेकी विष्नीको स्वास्थ्य पनि जोखिममा छ । कहिल्यै विद्यालय नगएकी उनले डोजर र ट्याक्टरको ड्राइभरले पनि आफुसंग सम्पर्क राखेको बताएकी छन् ।
तर त्यतीबेला आमाबुवाको डरले आफुमाथि भएको त्यस्तो घ ट नाका बारेमा नबताएको बताइन् । आफुलाई धुर्कुट र तम्घास लगेर आफु माथि त्यस्तो कु क र्म गर्ने गरेको बताइन् । झुपडीमा ७ जनाको परिवार राम्रो संग सुत्न र वस्न पनि नमिल्ने ठाउँ छ । तर परिवारका सदस्य कोही भूईमा त कोही खाटमा सुत्ने गरेको बताइन् । उनले आफुलाई एक जना महिलाले वुटवल लिएर गएर होटलमा राखेको बताइन् । त्यो होटलमा पनि आफु माथि सम्पर्क राख्ने मान्छे होटलमा आएको बताइन् । होटलमा भाँडा माझ्न भनेर लिएर गएकी महिलाले आफु माथि त्यस्तो काम गर्न लगाएको किशोरीले बताएकी छन् ।
कुकुरको मासु देखि आफ्नै दिशा खाने महिलाको व्यथा ! ललितपुरमा बन्दैछ- यस्तो अचम्मको घर (भिडियो हेर्नुस)
जन्मदिनमा आयुषसंग प्रियंकाको विवाह? भ्यालेन्टाइन डे मा हुदैछ बिशेष तयारी
पोखराकी ममताको रहस्यमय निधन सम्बन्धमा पहिलो पटक बोल्यो प्रहरी, यस्तो छ घट नाको नालीबेली (भिडियो हेर्नुस्)
रन्जनाका फेसबुकमा भेटिए यस्तो भिडीयो, बिचरा रवि नेपालमा श्रीमतीको लागि पलपल तड्पे (भिडियो)
विराटनगरमा १० रुपैयामै टन्न पेटभरी राजमाको दाल र बासमतीको चामलकै खाना खानु पाईने,घर लागे २० रुपैया,विराटनगर कहाँ छ त्यस्तो ठाउँ हेर्नुहोस ? (भिडियो)